Farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doono – M. Salaad | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doono – M. Salaad
Mahad Salaad oo ka mid ahaa xubnihii ku jiray baarlamaankii 10-aad ee sida weyn uga soo hor jeeday Farmaajo, shanti sano ee la soo dhaafay, ayaa ku baaqay in loo istaago iska xoreynta Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya – Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, oo ka mid ah xubnaha aan wali la dhaarin, ayaa ku baaqay in loo istaago sidii dalka looga badbaadin lahaa Farmaajo, kaasoo uu ku eedeeyay in aan laga dhaxli doonin dal iyo dad midna.
Mahad Salaad, wuxuu wax lala yaabo ku tilmaamay in halkii shan sano ka hor lagu doortay Farmaajo, ay maanta duullaan ku qaadaan Kooxda xiriirka la leh Al-qacida ee Al-Sahabaab, taasoo muujineysa fashil amni oo xooggan.
“Dhowr iyo toban sano meel Shabab waligood aysan imaanin ayay maanta ka dhex dagaallamayaan. Farmaajo dal iyo dad midna lagama dhaxli doono ee hanbada hartay halaga badbaadiyo”. Ayuu yiri Mahad.
Farmaajo, ka hor inta uusan noqon Madaxweynaha Soomaaliya, wuxuu baarlamaanka DF, ka hor sheegay inuu labo sano ku soo af-jari doono Al-Shabaab, hayeeshee, Shan sano, kadib, waxa ay taagan yihiin jidka uu u maro Aadan Cadde.
Farmaajo, wuxuu xilligaas si aan ganbad lahayn u sheegay in uu gawaarida gaashaaman ee AMISOM, gadaal ka gali doono, haddii ku fashilmo dagaalka Al-Shabaab, waase la yaab inuu mar kale, u taagan yahay qabashada xilka ugu sarreeya dalka.
Dhanka kale, xogo ay Keydmedia Online ka heshay, gudaha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde, ayaa sheegaya in daqiiqado ka hor, la soo af-jaray duullaanka ay dagaal yahanno ka tirsan Al-Shabaab ku qaadeen Xeyndaabka Xalane.
Kooxdii duullaanka soo qaadday ayaa guud ahaan la toogtay, waxaana hadda deggan xaaladda goobta weerarku ka dhacay, waxaana la soo warinayaa in dib loo billaabay dhaqdhaqaaqyadii garoonka diyaaradaha Aadan Cadde.